5 x2= 1. Vol - လူစုံ ~ မြန်မာ့သံစဉ်စာသားများ
5 x2= 1. Vol - လူစုံ
စိတ်လျှော့လိုက် ရေး - ဖိုးကာ၊ ဆို - R ဇာနည်
တစ်နေ့တာ ရေး - တင်ထွန်းအောင်၊ ဆို - BIG BAG
အကြင်နာလေးငါ့ကိုပေးပါ ရေး/ဆို - Galal'(အာတီချုပ်)
လမင်း ရေး - ယူရီဂါ၊ ဆို - ကောင်းထိုက်
မင်းအတွက်ကဗျာလေး ရေး - အိပု၊ ဆို - Cobra
နင်မချစ်လည်းပဲ ငါချစ်တယ် ရေး/ဆို - Cobra
စိတ်အနာ ရေး - ဟန်ထူးလွင်၊ ဆို - BIG BAG
ဘာသီးလဲ ရေး - ယူဂါရီ၊ ဆို - ကောင်းထိုက်
တောင်းပန်တယ် ရေး - Galal' ဆို - အာတီချုပ်
မင်းအတွက်သက်သက် ရေး - ဖိုးကာ၊ ဆို - R ဇာနည်